Yedu Inobatsira - Anping County Hangtong Wiremesh Co, Ltd.
80 Mhando dzezvigadzirwa
HT-FENCE inogona kugadzira 13 akateedzera zvigadzirwa, zvinosanganisira paza fenzi dzakateedzana, yakachengeteka yakakura 358 feni dzakateedzana, chengetedzo feni dzakateedzana, dziviriro yechidzitiro, gabion waya mesh akateedzana, garrison fenzi dzakateedzera, rakadzvanywa pfumo feni dzakateedzera, tubular fenzi dzakateedzera, cheni cheni yefuridziro fenzi dzakateedzera, barabha waya dzakateedzana uye concertina waya dzakateedzana, zvinopfuura makumi masere emhando makumi ezviuru zvemahara mesh uye zvigadzirwa zvefenzi. HT-FENCE inogona OEM zvakare, iwe unogona kutiudza zvaunoda, tinogona kugadzira seyako dhizaini uye ndokuomerera yako brand logo.
Zana zana rinoisa zvishandiso zvekugadzira zvigadzirwa zvefenzi
HT-FENCE inogara ichivandudza maitiro ekugadzira. Tine yepamusoro yekugadzira mutsara we electrophoretic pendi, poda yakasvikika machira, PVC inonamira, kuputika kuputika. Isu tine Intelligence hombe yakakura welded waya mesh muchina, otomatiki inotonhora ichigadzira ndiro muchina kugadzira fesiti post, palisade pales, uye zvakare yakakura jekiseni epurasitiki muchina wekugadzira marudzi ese ezvishongedzo zvefenzi. Kupfuura makumi maviri seti yemuchina wakarodzwa kugadzira maburi kana mapfumo.
HT-FENCE pachako zvigadzirwa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro manejimendi, zvigadzirwa zvedu zvakabvumirwa ne ISO9901: 2008, ISO 14001: 2015, OHSAS18001: 2007, Zvigadzirwa zvedu zvitsva Electrophoretic razor waya uye waya yakavezwa. Ichi chitupa chePATENT.
Yakabatanidzwa fenzi indasitiri kubvira1996
HT-FENCE yaita fenzi indasitiri kubva muna 1996. Tine ruzivo rwakakwana pane waya mesh uye zvigadzirwa zvefenzi. Tinogona kugadzira uye kupa wakakwana fenzi mhinduro. Kuti tideredze mutengo uye zvinonzwisisika dhizaini itiro redu. Isu tinopa zvigadzirwa zvemafiramu ekupararira kuCanada, USA, Mexico, Republic of Costa Rica,
Trinidad neTobago, Brazil, Chile, Panama, Colombia, Argentina, Japan,
Saudi Arabia, Russia, Germany, France, UK, Poland, Mozambique, Nigeria, Benin,
Sudan, Kenya, Mauritius uye zvichingodaro.
Pakudzivirirwa kweGasi kana indasitiri yemafuta, Kudzivirirwa kwemauto, Bhiriji, chivakwa cheAkaita, Nzvimbo yekuvaka, Zvivakwa zveindasitiri, Telecom & nhare yechitima
Airport, Mugwagwa uye njanji ndima. Bhizinesi redu rine zvakakwana zvetekinoroji rutsigiro uye ruzivo rwekugutsa mutengi wedu.
End mushandisi gara uchitipa kurumbidzwa kukuru. Isu tinochengeta kudyidzana kwakanaka nemutengi wedu kupfuura makore gumi.